दुःखका बेला उच्च ज्वरोका बिरामीलाई धमाधम घर फर्काउँदै लुम्बिनी मेडिकल कलेज – Palpa Samachar
By palpa samachar	 On Apr 3, 2020
पाल्पाको प्रशासनले एक्सन लिन नसकेको स्थानीयको गुनासो
पाल्पा । यस क्षेत्रकै ठूलो लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ज्वरो आएर आत्तिएका बिरामीहरुलाई उचित उपचार नदिएर घर फर्काएपछि कलेजको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
यही साता मात्रै उच्च ज्वरो आएपछि एम्बुलेन्समा अस्पताल पुगेका बगनासकाली २ पोखराथोकका दामोदर कुमाललाई राम्रोसँग उपचार नगरि अस्पताल परिसरबाटै फकाईएको बिषय सार्वजनिक भएपछि कलेजको तीव्र आलोचना भएको थियो ।
बिहीवार फेरि उच्च ज्वरो आएपछि उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पुगेका माथागढी ४ झडेवाका २० वर्षीय बिष्णु सारुलाई उचित उपचार नगरि घर फर्काइएपछि कलेजको पुनः चौतर्फी आलोचना भएको छ । बुटवलमा एक होटलमा काम गर्ने सारु केही दिन अघि घर आएको र उनलाई ज्वरो आएपछि प्रभास पठाइएको सहि उपचार नपाउनु दुखद भएको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार थापाले बताए । उनलाई शुक्रवार फेरि उपचारको लागि कलेजमा पठाइएको उनले बताए ।
कलेजका निर्देशक डा. राजु शाक्यले उनको अवस्था सामान्य रहेकोले उनलाइ घर पठाइएको जनाएका छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा बिरामीका आफन्तलाई डा. शाक्यले एक जना बिरामीका लागि अस्पतालका ७ सय कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकिने भनेर दिएको प्रतिक्रिया यतिबेला भाइरल भएको छ ।
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदी सहितको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु शुक्रवार मेडिकल कलेजमा पुगेर कलेजसित छलफल गरेका छन् । कलेजका प्रतिनिधिहरु प्रशासनको सामु आफूहरुले उचित सेवा दिदै आएको बताउने र अन्य समयमा बिरामीलाई उचित परामर्श नदिने गरेको बिरामीहरुको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीले अस्पतालले आफूहरुसितको छलफलमा आइन्दा अघिल्ला दिनको जस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । तर जनसमुदायले भने पाल्पाको प्रशासन लुम्बिनी मेडिकल कलेजका अगाडि सधै निरीह बन्दै आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रशासनको समेत आलोचना गरेका छन् ।
नीजि अस्पतालले फर्काएका बिरामी खोज्न सरकारी अस्पतालको टोली गाउँमा